Doorashooyinka Iyo Casharro Laga Baran Karo Koofur Galbeed – Goobjoog News
Doorashooyinka Iyo Casharro Laga Baran Karo Koofur Galbeed
Doorashada dadban ee Soomaaliya 2016-ka, waa la isku bartay, madasha iyo guddiga doorashada dadban mid federal iyo mid dowlad goboleedba horay ayaa loo bartay, haatan waxaa la soo gaaray xiligii la baran lahaa maamul goboleedyada iyo beelaha Soomaaliyeed ee loo yaqaano 4.5-ka.
Maamulka Koofur Galbeed iyo Beesha deegaankaasi ayaa noqnay dad ku dayasho mudan, ilaa iyo hadda marka laga hadlaayo doorashada 2016-ka gaar ahaan labada aqal, shaqadii laga rabay waxaa ay u qabteen sidii loogu talogalay.
Maamulkooda waxaa ay liiska murashaxiinta aqalka sare ku soo gudbiyeen guddiga doorashada waqtigii loogu talogalay iyo sidii loo rabay halka odoyaasha beeshana ay sidoo kale guddiga doorashada u gudbiyay liiska ergada doorasho intiisa badan.
Si ka duwan maamulka Koofur Galbeed, waxaa muuqata in maamullada dalka ka jira aaney rabin in haweenka ay siiyaan 30%, waxaa taasi daliil u ah, maamulka Galmudug oo doorashada aqalka sare ay ka bilaabatay arbacii xilli ay guddiga doorashooyinka dadban ka sugayeen in ay soo dhameystiraan Qoondada haweenka ee aqalka sare iyagoo-Galmudug-iska dhago tiray codsiga guddiga doorashada iyo beesha caalamka.
Dhismaha Labada Aqal:
Dhibaatada ugu badan waxaa ay ka jirtaa sidii loo dhameystiri lahaa liisaska doorashada labada aqal ee kala ah: aqalka baarlamaanka iyo midka odoyaasha.
Aqalka sare, 4 maamul oo ka mid ah 6 maamul ee dalka ka jirta ayaa soo gudbiyay liiska murashaxiinta, marka laga reebo koofur galbeed oo haweenka siisay ilaa 31%, inta kale waxaa ay keeneen liis caato ah, maamullada Puntland, Galmudug iyo Jubbaland waxaa lagu celiyay liiska murashaxiinta aqalka sare kadib markii ay liiskaas la soo gudbiyay ay siiyeen haweenka qoondo tiro iyo nisbo ahaanba aad u yar, Puntland 23%, Galmudug 21% halka Jubbaland ay siisay 15%.
Dhinaca kale, Odoyaasha dhaqanka iyo beelaha Soomaaliyeed waxaa ay ku guul-dareysteen in ay soo gudbiyaan liiska ergada doorasho oo lagu waday in ay sidaa dhacdo October 10, waxaa ilaa iyo hadda la soo gudbiyay ilaa 6,528 ergo, taas oo kala u bar ka yar inta xildhibaannada dooran doonta, ergada doorashada aqalka hoose u codeyn doonta sanadkan 2016-ka waxaa lagu qiyaasay ilaa 14,025 ergo, doorashada aqalka hoose waxaa lagu wadaa in ay dhacdo October 23- November 10, 2016-ka.
Qeybaha soo socda waxaan ku faafaahin doonaan sida Maamullada iyo Beelaha Soomaaliyeed u soo gudbiyeen murashaxiinta aqalka sare iyo ergada doorasho, waxaad arki doontaa in Koofur Galbeed ay labada dhinacba ama labada aqalba hogaamineyso, taas oo ku tuseysa in qowmiyadda Koofur Galbeed ay ka diyaarsan yihiin xagga doorashada maamullada iyo beelaha kale.
Maamul-ka Koofur Galbeed ayaa noqday maamulka keliya ee keenay qoondadii haweenka kadib markii liiska uu soo daray 5 haween ah, tiradaas oo u dhiganta ilaa 31%.
Aqalka sare, Odoyaasha iyo beesha degta Koofur Galbeed waxaa ay soo gudbiyeen ilaa ergada doorasho ee 57 Xildhibaan, waxaa laga rabay ergada 69 Xildhibaan, waxaa xusid mudan in beeshan ay ka mid tahay beelaha loo yaqaano 4.5-ka inta badan hal gobol ay degtaa halka beelaha kale ay gobollo badan kala degaan.
Maamullada Kale iyo Labada Aqal:
Maamulka Puntland waxaa uu keenay qoondo ka dhigay aqalka sare ilaa 23%, Galmudug waxaa ay murashaxiinta ku soo dareen 4 haween oo u dhiganta ilaa 21% halka Jubbaland liiska ay soo gudbisay laga dhex arki karo ilaa 3 haween ah oo u dhiganta ilaa 15%.
Waxaa kaloo aan warkooda la heyn Hirshabeelle iyo Somaliland oo aan la ogeyn xiliga ay soo gudbin doonaan murashaxiinta aqalka sare iyo qaabka ay u soo gudbin doonaan.
Ergada ay Beelaha Soo Gudbiyeen: Beelaha Jubbaland dega: 42 Kursi oo ah 2,142 ergo, Beelaha Galmudug 12 Kursi oo ah 612 ergo, Beelaha Puntland 6 Kursi oo ah 306 ergo, beelaha Hiiraan iyo Shabeellada dhexe ku nool waxaa ay soo gudbiyeen 11 Kursi oo ah 561 ergo.
Beelaha Somaliland iyo Banaadir, lagama haayo wax ergo ah, lamana oga sida ay wax noqon doonaan.
Doorashadan 2016-ka, waxaa muuqato in dhibaatooyin ay soo wajahayaan, maamullada dalka ka jira iyo beelaha Soomaaliyeed waxaa ay doorashada ka dhigi karaan mid fiican iyo mid xun, sida muuqato Koofur Galbeed iyo beelaha halkaas dega waxaa ay go’aan ku gaareen in doorasho galaan, weliba si fiican u galaan.
Jadwalka Doorashada dadban ee 2016-ka waa sidan:
In Madaxda Maamul Goboleedyada soo gudbiyaan xubnaha murashaxiinta aqalka sare ugu dambeyn 5 bisha Oktober 2016-ka.
In guddiga xallinta khilaafaadka uu howlgalo 8-da bisha Oktober 2016-ka
In Liika Magacyada ergada doorashooyinka golaha shacabka la soo dhameystiro ugu dambeyn 10-ka Oktober.
In doorashada golaha shacabka la qabto Oktober 23-10-ka Nofember 2016-ka.
In doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka cusub la qabto 23-ka bisha Nofember 2016-ka
In iyo doorashada Madaxweynaha la qabto 30-ka Nofember 2016-ka.
W/Q: Abdi Aziz Gurbiye,
Shacabka Gedo Oo Looga Digey Iney Taageeraan Al-shabaab
Dowladda Federaalka Ah Oo Aqalka Sare U Soo Jawaabtey, Guddi 4 Wasiir Ka Kooban Ayaa Ku Jira
Baaritaan Lagu Hayo Markab Sida Gargaar Bini’aadannimo Oo Ku Safrayey Magaca Xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir
Akhriso: Taariikh Nololeedka Golaha Dhaqaalaha Qaranka
Kaydka Goobjoog Select Month October 2020 (148) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (366) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
is there a generic viagra canadian pharmacy viagra online ph...
generic viagra india cheap generic viagra viagra over the co...
viagra coupon viagra online viagra prescription...
cheap generic viagra buy viagra generic viagra online for sa...
canada viagra viagra viagra online usa...